Shiinaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laabista ee Birta ah iyo YingYee
Waxyaabaha:Birta midabka leh, birta galvanized, birta aluminium
Xawaaraha samaynta:15-20m / daqiiqo
Qalabka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah wuxuu qaataa xakamaynta PLC, soo noqnoqda AC iyo hagaajinta tiknoolajiyada xawaaraha, waxayna ogaaneysaa soosaarka tooska ah ee joogtada ah, sidaa darteed, runtii waa nooc cusub oo ah keydinta tamarta iyo wax soo saar tayo sare leh oo qaab dhismeedka birta ah.
Qalabaynta - Hagaha Quudinta - Mashiinka Guud ee Samaynta Mashiinka - Nidaamka Iskuduwaha PLC - Goynta Kumbiyuutarka - Miiska Soo Saarka
Wax ceyriin Wareegyada horay loo rinjiyeeyay, gariiradda galvanized, gariiradda Aluminium
Kala duwan oo dhumucdiisuna waxay 0.2-1mm
Rollers 12-20 saf
Dhexroor usheeda dhexe iyo wax 70mm, maaddadu waa 40 Cr
Xawaaraha sameynta 10-15m / min
Waxyaabaha daab magaabay Bir caaryada Cr12 oo leh daaweyn la demiyey 58-62 ℃
Awoodda korantada ugu weyn 4KW
Awoodda korontada ku shaqeysa 3KW
Danab 380V / 3Phase / 5Hz
Wadarta miisaanka ilaa 3 tan
Nidaamka xakamaynta Omron PLC
YINGYEE waa soo saaraha ku takhasusay mashiinada sameynta qabow ee kala duwan iyo khadadka wax soo saarka otomaatiga ah. Waxaan haynaa koox layaableh oo leh tikniyoolajiyad heer sare ah iyo iib aad ufiican, oo bixiya alaab xirfadeed iyo adeeg laxiriira. Waxaan tixgelin siinay tirada iyo adeegga kadib, waxaan helnay jawaab celin aad uwanaagsan oo aan ku sharfno macaamiisha rasmiga ah. Waxaan heysanaa koox aad u fiican adeegga kadib. Waxaan u soo dirnay dhowr balastar ka dib kooxda adeegga si ay u dulmaraan si ay u dhammaystiraan alaabada rakibidda iyo hagaajinta. Alaabtayada waxaa laga iibiyay in ka badan 20 dal horeyba. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa Mareykanka iyo Jarmalka. Wax soo saarka ugu weyn:
Ma waxaad raadineysaa soo saare mashiinka mashiinka joogtada ah & soo-saaraha? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhammaan Mashiinka Mashiinka Laabista Xaashidu waa kuwo tayo leh. Waxaan nahay Shiinaha Asal ahaan Factory of Birta laabi Machine. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Qaybaha Wax soo Saarka: Mashiinka Mashiinka Uumiga ah ee Sameeya
Hore: Mashiinka Roll Sheet Roll Froming
Xiga: Midab Steel Roob tuuboyinka Roll U samaynta Machine
Mashiinnada Roll Samaynta taagan Samaynta
Mashiinka samaynta jiingado khafiif ah